अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको जर्नल प्रकाशित – Everest Dainik – News from Nepal
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको जर्नल प्रकाशित
काठमाडौं, पुस ३० । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति विभागले ‘जर्नल अफ इन्टरनेसनल अफेयर्स’को दोस्रो अंक प्रकाशन गरेको छ। सोमबार बिहान विश्वविद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक डा. लोकराज बरालले उक्त अंक विमोचन गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा बोल्दै डा. बरालले नेपालको विदेश नीति अझै पनि ज्ञानमा आधारित हुन नसकेको धारणा राखे। यस्ता जर्नलको प्रकाशनले नेपाली विदेश नीतिलाई ज्ञान आधारित र तथ्यपरक बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए। विश्वविद्यालयको मानविकी संकायका डिन प्रा.डा. शिव भुसालले विश्वविद्यालयले ज्ञान प्रसारण गर्ने भएकाले जर्नलको आवश्यकता पर्ने बताए। ‘विश्वविद्यालय जादुगर जस्तो होइन जसले आफूसँग भएको ज्ञान लुकाओस्’ भुसालले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीति विभागका प्रमुख डा. खड्ग केसीले एक वर्षको मेहनतबाट जर्नल प्रकाशन भएको बताए। उनका अनुसार जर्नलमा प्रकाशित लेखहरु चीनको सिचुआन विश्वविद्यालय, जापानको क्योटो विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चर्चित प्राध्यापकहरुले पूर्व समीक्षा गरेका छन्।
जर्नलमा पाँचवटा शोध निबन्ध समावेश छन्। वर्तमान सन्दर्भमा सार्वभौमिकताको सान्दर्भिकता, साना राज्यको नीति, नेपालको समृद्धि यात्रा, चीनको पछिल्लो विदेश नीतिजस्ता विषयमा आधारित शोध निबन्ध लेखिएका छन्। जर्नलमा नेपाल, भारत र बंगलादेशका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयविद्हरुले योगदान गरेका छन्। विमोचन कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका अध्यापकहरु ध्रुव केसी र अपेक्षा राणाले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
ट्याग्स: Journal of International affairs, TU